Ciidamada Booliska G/Banaadir oo howlgalo ka sameeyay Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Ciidamada boliiska qaybta gobolka banaadir iyo ciidamada sida gaarka u tababar ee RRT ayaa habeenimadii xalay howlgalo amniga lagu xaqiijinayo kasameeyey isgosyada magaalada Muqdisho, taasi loogu talagalay in bulshada caasimadda si nabad galyo ah ku soomaan .
Ciidamada ayaa gawaarida yar yar waydiinaaye wax aqoonsi ah in haystaan kadibna sii daynayeen , walow gawaarida BL-ka iyo Mootada Bajaajka dadka saaran ciidanka dajinayeen si baaritaano u maraan kadibna ku noqonayeen halkii markii hore kasoo dageen .
Baaritaankaan ayaa ka duwanaa baaritaanadii hore madaama ciidamada hore u baarijireen kaliya gawaarida yar yar balse xalay ayaa la arkaye ciidamada oo baaraya, misna aqoonsi waydiinaya gawaarida Soomaalida u taqaan Qooqanta ciidamo saran .
Inta howl-galka socday ayaa ciidamada waxa gawaarida ay wateen Dadka ka dajiyeen shaqsiyaad ay uga shakiyeen kooxaha amaanka kasoo horjeeda baaritaan kadibna sii daayen..
Taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir Gashaanle Sarre Bishaar Abshir Geedi oo u waramaaye Warbaahinta ayaa sheegay in arintaan ay qayb katahay sarre uqaadida Ammaanka Caasimadda.
“Runtii caawa waxaan howlgallo kasameynay Casimadda Soomaaliya ee Muqdisho, Qaybo ka mid ah oo lagu sugayo arrimaha amniga gobolka banaadir, Howshaasi waxaa ka qayb qaatay ciidamada booliska qaybta guud iyo ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan RRT oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, howlgalkaasi waxuu bilowday habeenkii ugu horeysay Ramadan , si is daba joog ah ayuu u soconayaa baaritaanka, iyadoo lagu xaqiijinayo amniga gobolka ilaa 30 bisha Ramadan ayuuna soconayaa, si muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu soomaan uguna afuraan soonka uguna ciidaan amni buuxda iyagoo haysta” ayuu yiri taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir gashanle sarre bishaar abshir geedi.
Taliyaha qaybta ayaa ka cosaday bulshada gobolka banaadir in ay Nabada u istaagaan ciidamadana la shaqeeyaan , taasi oo keeni karta in kuwa nabada kasoo horjeeda ay ku hungoobaan ficilada xun ay ka dhax sameeyaan shacabka waxuuna intaa ku daray in booliska uu u taagan yahay sarre u qaadida ammaanka dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho.
AMISOM oo sheegtay inay iska caabisay weerarkii Al-Shabaab ku soo qaadeen Halgan